Paikady miaramila "Art of War" no fomba manaraka handrombahana ny tsena | Martech Zone
Paikady miaramila «Art of War» no fomba manaraka handrombahana ny tsena
Talata, Martsa 13, 2018 Alatsinainy Martsa 12, 2018 Shawn Schwegman
Masiaka ny fifaninanana antsinjarany amin'izao andro izao. Miaraka amin'ireo mpilalao lehibe toa an'i Amazon manjaka amin'ny e-varotra, orinasa maro no miady mafy amin'ny fanamafisana ny toerany eo amin'ny tsena. Ireo mpivarotra loha ao amin'ireo orinasan-tserasera e-commerce ambony indrindra eto an-tany dia tsy mipetraka eny an-tsisiny fotsiny fa manantena ny hitrangan'ny vokatra. Mampiasa izy ireo Art of ady paikady sy paikady miaramila hanosehana ny vokatra alohany ho an'ny fahavalo. Andao hodinihintsika ny fomba fampiasana ity paikady ity hisamborana tsena…
Raha toa ny marika manjakazaka mirona amin'ny fampiasam-bola be dia be amin'ny fotoana sy loharanon-karena amin'ny loharanom-pifamoivoizana lehibe toy ny Google, Facebook ary tranokala afovoany marobe, ireo miditra vaovao amin'ny habaka fivarotana dia mety hahatsapa ho voafetra amin'ny safidy rehefa manandrana manitatra ny anjarany eo amin'ny tsena. Ireto fantsona ireto dia mifaninana tokoa, ary lafo toy izany na dia miaraka amin'ny fomba misy heviny aza.
Na izany aza, raha manantona ny tsena amin'ny paikady miaramila manakaiky izy ireo, dia afaka manangona loharanon-karena amin'ny bilaogy manokana sy tranokala niche kendrena, mandritra ny fampiasana ireo influencer tratra. Ny paikady dia mamela izay taloha a kely orinasa handanjalanja amin'ny fomba mahomby ny fanentanana ny marika ary hampitombo ny vola miditra. Ny fivoaran'ny fitomboana sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika dia hampindrana ny fidirana amin'ny tsena, hampivelatra tsikelikely ny fahafaha-manao marika manjaka amin'ny sehatra marketing sy dokambarotra ambony.
Zava-dehibe izao, mihoatra ny taloha, ny mifantoka amin'ireo mpifaninana. Sady masiaka no mivoatra hatrany ny fifaninanana amin'ny ampahany lehibe satria kely loatra ny sakana tsy hidirana amin'ny fivarotana antsinjarany. Saingy mety hoheverina ho toy ny fotoana mety ihany koa izany. Orinasa goavambe goavambe marobe no tsy mahatsapa raha tsy tara ny fotoana anaovan'ny olom-banona vao misondrotra vaovao ny sokajy lehibe iray an-tserasera. Ireo underdogs mety ho loharanon'ny fifaninanana ho an'ny titansan'ny indostria ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ahoana no nanombohany?
Target versus Walmart dia ohatra iray lehibe amin'ny fiatraikan'ny paikady miaramila. Tamin'ny taona 90, Walmart dia tsy natahotra fa Target dia manana ny fahaiza-manao haka ny mpanjifa lavitra azy ireo. Ny dian-tongotr'i Walmart tamin'izany dia tsy namela an'i Target hifaninana. Na izany aza, tetikady stratejika. Fantatr'i Target fa ny fomba tokana ahazoana mandroso eo amin'ny tsenan'ny mpivarotra boaty dia ny mifantoka amin'ireo sokajy voafantina izay tian'izy ireo hanjakazahana. Rehefa nandeha ny fotoana, nangalarin'ireo Target ny mpanjifa tao Walmart tamin'ny fifantohany tamin'ny sehatry ny serivisy ara-bola sy ny lamaody.
Ny paikady miaramila manakaiky dia nanjary nahomby tamin'ny orinasa maro hafa, toy ny mitarika fivarotana lehibe very amin'ireo miditra an-tserasera vaovao tamin'ny taona '80 sy 90 '. Tany am-piandohana dia nivarotra safidy lehibe tamin'ny fanaka sy fitaovana elektronika ireo magazay, saingy lafo ny vola nitazomana ny entana tao amin'ilay magazay ary tsy izany no tombony azony. Noho izany, nanomboka nanala ireo fitaovana elektronika sy fanaka teny ivelan'ny talantalana ireo magazay, saingy hitan'izy ireo fa nahatonga ny fihenan'ny mpanjifa izany, ary niafara tamin'ny fihenan'ny varotra izany. Mihabetsaka ny olona mahatsapa ny herin'ny fiantsenana an-tserasera, ahafahan'ny mpiditra vaovao eo an-tsena hahazo ny varotra ary hanalavitra ilay orinasa e-varotra teo aloha.
Mihatra amin'ny marketing nomerika amin'ny fomba mitovy amin'izany ihany koa.
Ankehitriny izay zavatra mety ilainao dia ho hita amin'ny Internet. Raha mbola mitazona ampahany betsaka amin'ny tsena ny mpivarotra toa an'i Walmart sy Target, dia hitan'ireo orinasa fa sarotra noho ny hatramin'izay ny mifaninana amin'ny varotra an-tserasera amin'ireo mpivarotra kely kokoa.
Iza avy ireo mpamono sokajy?
Ny fijerena ny lobakan'ny lehilahy dia fomba tsara iray ahatakarana ny fomba hampiasan'ny mpivarotra antsinjarany ireo orinasan-tserasera tena kendrena hivarotra mihoatra ny fivarotana lehibe. Mora ny mieritreritra fa ny fivarotana toa an'i Macy's, Nordstrom ary i JCPenney dia mivarotra ny ankamaroan'ny lobaka ho an'ny lehilahy. Saingy, ireo orinasan-damaody maoderina toa ny Bonobos, Club Monaco ary UnTUCKit dia manosika haingana ny tsena.
Ireo orinasan-dehilahy voalaza etsy ambony ireo dia mahazo vahana eo amin'ny tsena, indrindra amin'ny alàlan'ny bilaogy manokana, hahatratrarana mpihaino vaovao, eo am-pamoronana fiaraha-miasa amin'ny haino aman-jery tsy fantatra, fa orinasan-tserasera avo lenta. Ohatra, UnTUCKit amin'izao fotoana izao no orin'akanjo lehilahy izay mampiasa Barstool Sports, orinasan-gazety izay nitondra olona mihoatra ny 6 tapitrisa tao amin'ny tranonkalan'ny marika tao anatin'ny 12 volana lasa.
Ny akanjon-dehilahy dia tsy ny sokajy ahatongavan'ity taktika ity ho marina. Rehefa mijery ny atin'akanjo vehivavy dia hitanao fa misy fironana toa izao rehefa miditra amin'ny tsena ny orinasa vaovao ary mifaninana amin'i Nordstrom sy Macy's, mpivarotra akanjo anaty vehivavy. Thirdlove, Yandy, ary WarLively dia nanilika olona mihoatra ny 50 tapitrisa miala amin'ireo marika mitarika mankany amin'ny tranonkalany tamin'ny alàlan'ny fampisehoana tsara tamin'ny Facebook. Hitan'i Nordstrom fa nihena ny fifamoivoizany taorian'ny nanombohan'ny ThirdLove fampiasana an'i Cupofjo ho loharanom-pifamoivoizana matanjaka.
Ny hevi-dehibe eto dia ny mpiditra vaovao dia tsy vitan'ny mifaninana fotsiny, mandresy izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana karazana loharanom-pifamoivoizana, ary mifantoka amin'ny teknika fitadiavana marimaritra iraisana amin'ireo faritra izay tsy dia miraharaha firy ireo mpilalao nentim-paharazana, na ela loatra manetsiketsika loharano.
Haharitra ve ireo fivarotana boaty lehibe?
Ankehitriny rehefa hita ny olana dia tsy maintsy miaro ny orinasan-dry zareo ny fivarotana lehibe amin'ny fiarovana ireo faritra telo lehibe: sisiny, fifamoivoizana ary marika / fifandraisana.
Margin- Aza mieritreritra fotsiny fa ny mpivarotra boaty lehibe no loharanon'ny fifaninanana misy anao. Fantaro hoe sokajy inona no mifehy ny fivarotana anao ary tazomy ireo.
Fifamoivoizana- Fantaro hoe avy aiza ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao sy ny fomba fivadihan'ity fifamoivoizana ity ho lasa mpanjifa. Mba hanaovana izany dia ampiasao fitaovana izay hanampy anao manoritra hetsika azo isaina hitondrana fivezivezena tsara kalitao mba hampitomboana ny loharanon'ny fivezivezena referral.
Brand / Awareness- Mivoatra ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary mila mivoatra miaraka amin'izany ianao. Tena zava-dehibe ny mitazona laza tsara amin'ny mpanjifa. Matetika ny orinasa mahita ny ankamaroan'ny zava-baovao mitranga rehefa takatrao ny andrasan'ny mpanjifa sy ny fomba ahitan'ny orinasanao izany andrasana izany. Ny fihazonana ny serivisy ho an'ny mpanjifanao dia lakilen'ny fihazonana ny toerana eo amin'ny tsena.
Ny fananana fahatakarana tanteraka ny momba ny mpifaninana aminao dia nanjary sarotra kokoa. Zava-dehibe ny fitazonana ny fikarohana mafy amin'ny fifaninanana mba hahafantarana tsara ireo marika vao misondrotra eo amin'ny sehatry ny tsenao. Raha te handresy amin'ny 2018, ny marika dia tsy maintsy mitazona ny fifantohany manokana amin'ny hoe iza ny mpanjifany sy ny fomba hikendrena azy ireo, samy mampiasa paikady miaramila manakaiky.
Momba ny DemandJump:
DemandJump ahafahan'ny orinasa manatsara ny fampiasam-bolany amin'ny Internet miaraka amina tanjona tsy manam-paharoa sy marina. Ny sehatr'asa Traffic Cloud ™ izay nahazo loka tamin'ny orinasa dia mampiasa teôria matematika saro-pantarina (tsikombakomba artifisialy) hamakafaka ny ekosistia nomerika ifaninan'ny mpanjifa. Avy eo ny sehatra dia manome drafitra hetsika laharam-pahamehana momba ny toerana, ny fomba sy ny fotoana hampiasana dolara ara-barotra mba hitondrana fifamoivoizana mahafeno fepetra manerana ny fantsona, ka hiteraka mpanjifa vaovao avy amin'ireo mpifaninana mivantana.
Tags: AmazonBonobosmpamono sokajyClub Monacodemandjumptrano fivarotanaecommerceMacy nyfivarotananordstromantsinjaranylasibatraThirdloveUnTUCKitWalmartWarLivelyYandy
Shawn Schwegman dia mpiara-manorina sy lohan'ny lehiben'ny paikady ao amin'ny DemandJump. Shawn dia niara-niasa tamin'ny Overstock.com, ChaCha, Sally Beauty, Target, NewEgg, eToys, Cisco, Costco, sns.
Ahoana no ahafahan'ny marketing amin'ny mailaka ivelany manohana ny tanjon'ny varotrao